Fampandrenesana momba ny zon'ny mpamorona | Fifamoivoizana hiara-miasa
TopDogs Rotator Rafitra fifamoivoizana
Mahazoa fifamoivoizana toy ny amboa ambony.
Hery matanjaka hananganana fisoratana anarana sy fivezivezena be.
Tanisao ireo tranonkala tsy voafetra
Mahazo komisiona 40% = amidy hatramin'ny $ 59 ianao
Mahazo 5% isaky ny fonosana amidy ianao = mahatratra 50,000 ny isan-jato isaky ny mandeha
Mahazo 10% ihany koa ianao amin'ny varotra izay resahin'ny fisoratana anarana!
Ity manaraka ity dia mamaritra ny Fanamarihana momba ny zon'ny mpamorona momba ny My Traffic Blog tranonkala.
Ny atiny rehetra an'ny My Traffic Blog tranonkala dia arovan'ny lalàna mifehy ny fananana ara-tsaina, ao anatin'izany ny lalàna mifehy ny zon'ny mpamorona sy ny marika iraisam-pirenena. Ny tompon'ny zon'ny mpamorona sy / na ny mari-barotra dia anay tranonkala, ary / na fahazoan-dàlana fahatelo na orinasa hafa mifandraika amin'izany.
Tsy manan-jo hanana lahatsoratra, boky, e-boky, antontan-taratasy, lahatsoratra bilaogy, rindrambaiko, fampiharana, add-on, plugin, kanto, sary, sary, sary, horonan-tsary, webinar, fandraisam-peo na fitaovana hafa nojerena na henoina ianao amin'ny alalàn'ny My Traffic Blog tranonkala na amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny alàlan'ny atiny voaaro amin'ny tranokalan'ny mpikambana. Ny fandefasana antontan-kevitra ao amin'ny tranokalanay, toy ny bilaogy fanehoan-kevitra, tsy manova an'io zava-misy io ary tsy manome anao zon'ny data. Averinao ny zon'ny atiny anao raha vao tafiditra ao amin'ny tranokalanay izany.
TSY AZONAO ATAO HANOVANA, MIASA, MANAO LALANA, REPUBLISH, MAMPANDROSO, POST, TRANSMIT, NA DISTRIBUTY, AMIN'NY FOMBA FOMBA FANAMARIHANA, NY ZAVATRA MISY AMIN'NY WEBSITE ANTSIKA, ATAON'NY TEXT, GRAPHICS, CODE SY / NA SOFTWARE. Ianao dia tsy maintsy mitazona ny zon'ny mpamorona sy ny fampandrenesana tompona rehetra ao anaty akora voalohany amin'ny kopia rehetra nataonao tamin'ilay fitaovana. Tsy azonao atao ny mivarotra na manova ny fitaovana na mamerina, mampiseho, manao ampahibemaso, mizara, na amin'ny fomba hafa, amin'ny fomba rehetra na amin'ny lafiny ara-barotra na ara-barotra. Voarara ny fampiasana fitaovana voaloa amin'ny tranokala hafa na amin'ny tontolon'ny solosaina tambajotra na inona na inona tanjona. Raha mandika ny iray amin'ireo fepetra na fepetra ianao dia mijanona ho azy ny fahazoan-dàlana hampiasa ilay fitaovana ary tsy maintsy manimba avy hatrany izay kopia nataonao momba ilay fitaovana ianao.
Nomena fahazoan-dàlana tsy miankina, tsy azo nafindra, azo foanana ianao hampiasa ny My Traffic Tranonkala bilaogy fotsiny noho ny antony tsy miankina, manokana, tsy ara-barotra. Azonao atao ny manonta sy misintona ny ampahan'ny fitaovana avy amin'ny faritra samihafa amin'ny tranokala fotsiny ho an'ny fampiasanao tsy ara-barotra anao, raha toa ka manaiky ianao fa tsy hanova ny atiny amin'ny endriny voalohany. Ankoatr'izay, manaiky ianao fa tsy hanova na hamafa ny zon'ny mpamorona na ny fanamarihana ara-pananana avy amin'ireo fitaovana soratanao na alainao avy amin'ny My Traffic Blog. Mariho ihany koa fa ny fampandrenesana amin'ny ampahany amin'ny tranonkalantsika izay mandrara ny fanontana sy ny fisintomana dia manambina ny fanambarana sy ny fanaraha-maso rehetra teo aloha.
Amin'ny maha mpampiasa anao ao amin'ny My Traffic Blog, manaiky ianao hampiasa ireo vokatra ary tolotra atolotry ny tranonkalantsika amin'ny fomba mifanaraka amin'ny lalàna sy ny lalàna eo an-toerana, fanjakana ary federaly. Tsy misy fitaovana hotehirizina na ampitaina izay manitsakitsaka na manitsakitsaka ny zon'ny hafa, izay tsy ara-dalàna, vetaveta, maloto, maloto na maharikoriko, fandrahonana, fanalam-baraka, na fanararaotana ny zon'ny tsiambaratelo na zon'ny fanaovana dokambarotra
Ny tranonkalantsika dia mandrara ny fitondran-tena izay mety miteraka fandikan-dalàna, miteraka andraikitra ara-panjakana na mandika lalàna. Izay hetsika mametra na manakana ny mpampiasa Blog My Traffic hafa tsy hampiasa ny tolotra voarara koa ny tranokalanay. Raha tsy avelan'ny fifanarahana an-tsoratra ianao dia tsy azonao atao ny mandefa na mandefa doka na fangatahana varotra amin'ny tranokalanay.
FANAMARIHANA FANOVANA: Toy ny pejy fampandrenesana ara-pitantanana sy ara-dalàna anay rehetra, ny atin'ny pejy dia afaka miova rehefa mandeha ny fotoana. Araka izany, ity pejy ity dia afaka mamaky hafa amin'ny fitsidihanao manaraka. Ilaina ireo fanovana ireo, ary tanterahan'ny My Traffic Blog, mba hiarovana anao sy ny tranonkalako My Traffic Blog. Raha zava-dehibe aminao ity pejy ity dia tokony hijerena matetika ianao satria tsy misy fampandrenesana hafa momba ny atiny voaova omena na alohan'ny na aorian'ny fiatraikany.
FAMPITANDREMANA COPYRIGHT: Ireo fanamarihana ara-dalàna sy ireo pejy fitantanan'ity tranonkala ity, anisan'izany ity iray ity, dia navoakan'ny mpisolovava iray tamim-pahazotoana. Izahay ao amin'ny My Traffic Blog dia nandoa vola mba hanomezana alalana ny fampiasana ireo fampandrenesana ara-dalàna sy ireo pejy fitantananana ao amin'ny My Traffic Blog ho fiarovana anao sy anay. Ity fitaovana ity dia mety tsy hampiasaina amin'ny antony na antony inona ary ny fampiasana tsy nahazoana alàlana dia nopetahana tamin'ny alàlan'ny Copyscape mba hahitana ireo mpandika lalàna.